K/galbeed Oo Ammar Ku Bixisey Iney Is Diiwaangeliyaan Ganacsatada Gobolka Baay | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta K/galbeed Oo Ammar Ku Bixisey Iney Is Diiwaangeliyaan Ganacsatada Gobolka Baay
Maamulka K/galbeed ayaa ku amray ganacsatada gobolka Baay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay isku diiwaangeliyaan si loo helo isla xisaabtan dhab ah.
Xasan Ibraahim lug-buur, wasiirka maaliyadda maamulka K/galbeed oo saxaafadda kula hadlay magaalada Baydhabo ayaa sheegay in gacanacsatada looga baahan yahay in ugu dambeyn is soo diiwaangeliyaan 15-ka bishan Maarso illaa 1-da bisha April.
Waxa uu sheegay wasiirka in la bilaabayo qaadista canshuuraha si bulshada K/galbeed waxa loogu qabto, loona baahan yahay cid walbo oo canshuur ku waajibtay iney iska diiwaangeliso bankiga Baydhabo oo diiwaangelinta ka socoto.
“Ganacsatada waa iney isku diiwaangeliyaan muddo 15 cisho ah gudahooda, waxaan rabnaa iney is diiwaangeliyaan cid walbo oo ay ku waajibtay canshuuraha, waxaan rabnaa in dalka horumar gaaro, inaan wax u qabanno bulshadeenna, dowlad canshuur la’aan ma shaqeyn karto” ayuu yiri wasiirka.
Ugu dambeyn wasiirka maaliyadda ee maamulkaa K/galbeed Xasan Ibraahim ayaa ugu baaqay ganacsatada gobolka Baay iney u hoggaansamaan ammarkaasi.